OpenSolaris dia hitohy hisokatra sy maimaim-poana | Avy amin'ny Linux
Ny tompon'andraikitra ambony ao Oracle dia manome toky amin'ny hetsika ampahibemaso natao tamin'ny Internet ny fahaveloman'ny kinova misokatra amin'ny rafitra fiasa noforonin'ny Sun Microsystems ary koa ny orinasa vaovao dia hanohy hanohana an'ity hetsika ataon'ny vondrom-piarahamonina ity. Ny kinova OpenSolaris manaraka dia afaka navoaka tamin'ny faran'ity volana ity.
Taorian'ny volana maro nisalasalana taorian'ny fanambarana nataon'i Oracle momba ny fahazoana Sun Microsystems, dia nazavaina ihany ny toe-javatra OpenSolaris. Ny feo pessimistic sasany dia miloka amin'ny fanafoanana ilay tetikasa, satria Oracle dia tsy orinasa tena nanohana ny rindrambaiko maimaimpoana * *, ny sasany kosa nanamafy fa ny hoavin'ilay tetikasa dia voaro tamin'ny fifanarahana fivarotana fividianana sonia nataon'ny Sun.
Tamin'ny fivoriana fanao isan-taona tato ho ato an'ny tetikasa, natao tamin'ny alàlan'ny IRC (Internet Relay Chat) tao amin'ny fantsom-pivoriana # opensolaris-n'ny tamba-jotra FreeNode, Dan Roberts (Talen'ny Product Management for Oracle ary Sun Microsystems teo aloha executive) Nanome toky izy fa hanohy hatoky ity tetikasa ity ny Oracle ary hitohy ho rindrambaiko maimaimpoana ny OpenSolaris. Na izany aza, nanazava ihany koa izy fa, toa ny Masoandro, dia mety misy ampahany amin'ny haitao sasany izay aleon'i Oracle mihidy. Raha ny marina, ny orinasa nahazo dia tsy nitsahatra nampifangaro ny vahaolana misokatra amin'ny tompona orinasa hafa, noho izany ny Oracle vaovao dia handova izany fomba fandehany izany.
Raha ny marina, ary azo tsoahina avy amin'ny tenin'i Roberts, Oracle dia hampiasa vola be amin'ny sehatry ny rindrambaiko Sun Microsystems, na amin'ny kinanjo azy (Solaris) na amin'ny toby malalaka (OpenSolaris), ary koa amin'ny fitaovana nolovaina tamin'ny ilay orinasa nahazo, satria hanohy hametraka ezaka (mihoatra ny Masoandro aza, hoy i Roberts) na amin'ny kinova x86 na SPARC amin'ity sehatra ity, izay anarahana azy fa hamboarina ihany koa ny fitaovan'ny Sun.
Ny fanitsiana OpenSolaris manaraka, 2010.03, dia tokony hahita ny mazava - araka ny tondroin'ny anarany - mandritra ity volana ity, teboka iray nomen'i Roberts azo antoka ihany koa.
Ny fanambaran'i Roberts dia nangonin'ireo gazety an-tserasera isan-karazany natokana ho an'ny teknolojia vaovao.
* raha ny marina dia fantatra amin'ny faribolan'ny solosaina izy amin'ny hoe 'ilay Microsoft hafa'
Hita ao | iMatic
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » OpenSolaris dia hitohy hisokatra sy maimaim-poana